Firefox Nightly for Developers 68.1a1 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 68.1a1 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
Application မ်ား ဆက္သြယ္ေရး Firefox Nightly for Developers
Firefox Nightly for Developers ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Firefox ကိုညစဉ်ညတိုင်းသစ်ကို Mozilla Firefox ကိုလွှတ်ပေးဘို့တစ်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာရုပ်သံလိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
Firefox ကို Aurora မရှိတော့ရရှိနိုင်ပါသည်နှင့် Firefox ကိုညစဉ်ညတိုင်းအဖြစ်ပြောင်းလဲထားပါတယ်သတိပြုပါ။ ဤနေရာတွင်အသေးစိတ်: https://hacks.mozilla.org/2017/04/simplifying-firefox-release-channels/
ဤနေရာတွင် Firefox ကိုများလွှတ်ပေးရန်ဗားရှင်း Download: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mozilla.firefox
Firefox ကိုညစဉ်ညတိုင်းပိုစမ်းသပ် Firefox ကို၏တည်ဆောက်တခုအဖြစ်ဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ အဆိုပါညစဉ်ညတိုင်းရုပ်သံလိုင်းအသုံးပြုသူများသည်တစ်ဦးမတည်မငြိမ်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်နောက်ဆုံးပေါ် Firefox ကိုတီထွင်မှုကိုတွေ့ကြုံခံစားခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးဖြန့်ချိစေသည်ဘယ်အရာကိုဆုံးဖြတ်ရန်ကူညီရန် features နဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်တုံ့ပြန်ချက်များကိုခွင့်ပြုပါတယ်။
တစ်ဦး bug ကိုတွေ့သည်? https://mzl.la/android_bugs မှာတိုင်ကြားရန်
Firefox ကိုညစဉ်ညတိုင်းအလိုအလြောကျ Mozilla ကမှတုံ့ပြန်ချက်ပို့ပေး: https://www.mozilla.org/privacy/firefox/#telemetry
ခွင့်ပြုချက် Firefox ကိုတောင်းဆိုမှုများနှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုသိလိုပါသလား? https://mzl.la/Permissions
https://www.mozilla.org/firefox/mobile/platforms/ မှာထောက်ခံ devices များနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်နိမ့်ဆုံးစနစ်ကလိုအပ်ချက်များကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းကိုကြည့်ပါ
Mozilla ကစျေးကွက်: အချို့သော Mozilla ကစျေးကွက်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးရဲ့ performance ကိုနားလည်ရန်အလို့ငှာ, Firefox ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့တတိယပါတီရောင်းချသူမှတစ်ဦးကို Google ကြော်ငြာ ID ကို, အိုင်ပီလိပ်စာ, Timestamp ကို, နိုင်ငံ, ဘာသာစကား / ဒေသ, operating system ကို, app ကိုဗားရှင်းအပါအဝင်, ဒေတာပို့လွှတ်သည်။ https://www.mozilla.org/privacy/firefox/: ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ရေးသတိပေးချက်ဖတ်ရှုခြင်းဖြင့်ပိုမိုလေ့လာသင်ယူ
Firefox Nightly for Developers အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Firefox Nightly for Developers အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Firefox Nightly for Developers အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Firefox Nightly for Developers အား အခ်က္ျပပါ
jcsesecuneta စတိုး 1.13k 424.77k
Firefox Nightly for Developers ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Firefox Nightly for Developers အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 68.1a1
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.mozilla.org/legal/privacy/firefox.html
App Name: Firefox Nightly for Developers
Release date: 2019-08-24 15:56:15
လက်မှတ် SHA1: 1A:1B:84:EE:C9:B7:BB:FB:19:85:93:03:87:73:33:DF:89:4B:5F:1C
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Mozilla Builds
အဖွဲ့အစည်း (O): Mozilla
Firefox Nightly for Developers APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ